सैमसंग ग्यालेक्सी जेड फ्लिप renders मा देखाइएको छ Androidsis
यो २०२० को महत्वपूर्ण स्मार्टफोन मध्ये एक हुनेछ, कम से कम पछि तीन उपकरणहरु ग्यालेक्सी S20 (ग्यालेक्सी S11) प्रस्तुत। को केहि शंका यो लाइन को अस्तित्व उनीहरुले हामीलाई व्याख्या गर्न को लागी आउँदैछ, जो थोरै हुने वाला छैन, क्षेत्र को एक महत्वपूर्ण कम्पनीहरु द्वारा।
सायद यो ग्यालेक्सी फोल्ड २ को विकल्प बन्छ, सैमसंग ग्यालेक्सी जेड क्लिप अफवाह ग्यालेक्सी ब्लूम हो र त्यो २०२० को लागी सबै भन्दा राम्रो रेटेड स्मार्टफोनहरु मध्ये एक हुन सक्छ। पहिलो रेन्डरहरु एक आदर्श दोहोरो स्क्रीन जडान देखाउनुहुन्छ यदि तपाइँ दोहोरो पर्दा को सबैभन्दा बाहिर प्राप्त गर्न चाहानुहुन्छ।
ग्यालेक्सी जेड फ्लिप दायाँ मा एक पावर बटन थप्नेछ, उनीहरु मध्ये धेरै यसलाई छेउ मा माउन्ट गर्न को लागी र यो गर्न को लागी यो केन्द्रीय बटन संग अन्य अवसरहरुमा हुन्छ जस्तै गर्न रुचाउँछन्। यस मामला मा निर्माता पक्ष को एक छान्नुहोस् र अक्ष को रूप मा पर्दा छैन।
यो फोन माथिल्लो आधा मा एक भोल्युम रकर जोड्दछ। त्यहाँ एक सानो बाह्य मुख्य मुख्य दोहोरो क्यामेरा र एकल एलईडी फ्ल्यास को बगलमा पर्दा छ। सेन्सर हाल अज्ञात छन् र हामी केहि हप्ताहरुमा मुख्य प्रक्षेपण भन्दा पहिले यो थाहा पाउने छौं।
भित्री डिस्प्ले बिल्ट-इन सेल्फी क्यामेराको साथ एक स्क्रिन देखाउँदछ, जुन १० मेगापिक्सेल सेन्सर फिचर हुने हल्ला छ। भेला प्रोसेसर एक हो Snapdragon 855 क्वालकॉम र दुई ब्याट्रीहरु को लागी एक छिटो चार्ज राख्न को लागी निर्णय गर्दछ माथिको सैमसंग ग्यालेक्सी जेड फ्लिप मा.
सैमसंग ग्यालेक्सी जेड फ्लिप फेब्रुअरी ११ मा घोषणा गरिनेछ
ब्याट्रीहरु मध्ये एक m ०० एमएएच जस्तै छ ग्यालेक्सी फोल्ड २ मा पहिले नै लीक भएको छ, अर्को अहिले सम्म अज्ञात छ। को ग्यालेक्सी जेड फ्लिप एक डबल ग्लास स्क्रीन हुनेछ प्लास्टिक सामाग्री संग, छनौट प्यानल 6,7. inches इन्च हुनेछ, त्यसैले यो ग्यालेक्सी S20 फेब्रुअरी ११ मा कार्यक्रम को दौरान घोषणा गर्ने लक्ष्य छ।
छवि - LetsGigDigital.
लेखको पूर्ण मार्ग: एन्ड्रोइडसिस » एन्ड्रोइड उपकरणहरू » मोबाईलहरू » सामसु Galaxy ग्यालेक्सी जेड फ्लिप रेन्डरहरूमा देखाईयो